Doorashada adeeg bixiye VoIP Broadband Service
Adeegga taleefanka gacanta oo ballaadhan ayaa u saamaxaya wicitaannada telefoonka si ay uga shaqeeyaan xiriirka internetka ee xawaaraha sare leh. Teleefan telefan ah (sidoo kale loo yaqaano VoIP ama taleefanka internetka ) wuxuu isticmaalaa shabakad isku mid ah adeega Internetka. Qalabyada qalabka casriga waxay ku xiranyihiin telefoon caadi ah oo xiriir la leh xawaaraha sare ee internetka si loo abuuro telefoon ballaadhan.
Bixiyaha Adeegga Telefoonada Weyn ee Broadband Internet Compatibility
Adeegyada telefoonada badankoodu waxay ku shaqeeyaan keliya DSL ama modem modem Internet . Haddii aad u-qorto fariinta, adeegga internet -ka ama satellite- ka , adeegyadan telefoonkani uma badna inay ka shaqeeyaan gurigaaga.
Qorshayaasha Adeegga Telefoonada Broadband
Bixiyeyaasha adeegga waxay bixiyaan qorshooyin badan oo taleefan oo kala duwan. Sida telefanka gacanta , qorshooyinka adeegga qaarkood ee taleefanadu waxay ka muuqdaan wicitaan aan rasmi ahayn ama tiro badan oo ah daqiiqado bilaash ah. Si kastaba ha ahaatee, kharashka adeegga taleefannada wicitaanada waa mid aad u kala duwan; qarashka caalamiga ah, masaafada dheer iyo wicitaannada kale ee wicitaanada badanaa wali way dalbadaan
Wanaajinta Telefoonada Broadband
Marka la barbardhigo shabakadda taleefanka ku salaysan ee internetka, shabakadda telefanka caadiga ah ee aqalka aqalka ayaa ah mid aad loogu kalsoon yahay. Wicitaanada looma dhigi karo telefoonka ballanka mar kasta oo adeegga internetka ee gurigaagu uu hoos u dhaco. Dhibaatooyin dheeraad ah oo ka jira adeegga telefanka gacanta ee laftiisa ayaa ku dari doona wakhti dhimis oo ay sababtay xiriirka internetka.
Kaararka Nambarka Telefoonada Broadband
Tilmaamo caan ah oo la xidhiidha telefoonada wicitaanada ballaadhan waa tirada kartida. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad haysato lambarka taleefanka ee aad horey u soo qaadatay ka hor inta aanad ku biirin qorshaha internetka. Si kastaba ha noqotee, muuqaalkan lama heli karo iyada oo ku xiran lambarkaaga iyo shirkadda taleefanka gacanta ee degmada. Waxaad caadi ahaan masuul ka tahay codsashada iyo bixinta adeegga telefanka gacanta ee ballaaran.
Qalabka Adeegga Telefoonada ee Broadband-In
Heshiiska aad ku saxiixday bixiyaha adeegga taleefannada gacanta ayaa laga yaabaa inuu xaddido awoodaada inaad beddesho bixiyeyaasha waqti dambe. Lacagaha adeegga sare waxaa laga yaabaa in lagu soo dallaco si loo baddalo lambarka taleefanka, qorshaha adeegga, ama u beddesho shirkad telefoon oo kale. Sidoo kale, shirkadda taleefanka ee degaanka ayaa laga yaabaa inay bixiso lacago badan si ay u soo celiyaan adeeggooda, haddii aad maskaxdaada beddesho.
Tayada Telefoonada Wanaagsan
Sanadihii la soo dhaafay, tayada codka ee taageerada adeegga telefoonada ballaadhan ayaa aad uga yaraa adeega telefoonka caadiga ah. Inkastoo ay ku kala duwanaan karto adeeg bixiyaha iyo goobta, guud ahaan, tayada telefanka gacanta ee wanaajinta waa mid aad u wanaagsan. Waxaa dhici karta in aad dib u dhigto ("lagaa") inta u dhaxaysa markaad hadlayso iyo dhinaca kale codkaaga maqlo.
Sida Loo Bedelo Videos Videos
Ka daawo fiidiyowga muusikada bilaashka ah muusikada AOL Music
6 Websaydhiyada si loo helo fiidiyowyo Online
Pheed Streamed Pay-Per-View Munaasabadaha Moobilka Mobile-ka
Dib u eegista Imtixaanka Xawaaraha Internetka ee CNET
Waa maxay Google Docs?
Top 6 Talo-siinta Maqalka iyo Muuqaalka Download Free Movie
Nambarada Dekedaha waxaa loo Isticmaalaa Shabakadaha Computer
Sidee loo galiyaa Sawirada ama Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka
Muuqaalka Muuqaalka Macruufku wuxuu ka dhigayaa Naxariis si Loogu Yeelo Emails
Muujinta Macluumaadka ee Dukaanka iTunes
Bitdefender, Romania, iyo Dragon-Wolf
Taxanaha Macluumaadka Qoraallada Jaantuska, Qodobbada Macluumaadka, Calaamadaha Warbixinta
Waa maxay "Boostaajada Qorista"?
Habka Naqshadaha Webka
Cinwaan Paradigm Cinema 100 Nidaamka Kalfadhiga Tiyaatarka ee Xisaabta - Dib u eegis
Kombiyuutarka Dijital ah
Iska ilaali khidmadaha hore ee joojinta ee Heshiiska Telefoonada gacanta
Sida loo soocayo sanduuqa boostada ee Windows Mail ama Outlook Express
Khariidadaha Baaskiilada ku soo hagaaji Garmin Edge Cycle Computer
Waa maxay Sawirada Retina?
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee iPad-ka
Fahamka in Bixiyeyaasha Baaskiilku ay si Wacan ugu Fiican yihiin
Miisaanka Macaashka: Shirkada ugu Fiican ee Lacag bixinta, Pre-Pay-You-Go Plans
Isticmaalida Miisaanka & Screen Saver Pane Preferences
Dib u Eegid Rdio
Sida Loo Helo Sawirradaada ama Maktabada iPhoto
Baro si dhakhso ah Archive ama Delete farriimo ee iimayl
Waa maxay Isku-xirka Shabakadda?